Waxay ku egtahay ceelasha: fikradaha lagu ilaaliyo qaabkaaga roobka | Ragga Stylish
Weli miyaad ku hagaajineysaa muuqaalkaaga ceelasha? Ninka jilicsan waa inuu lahaadaa ilo adag dhammaan munaasabadaha. Iyo haa, inkasta oo aysan ahayn kuwa ugu xiisaha badan, maalmaha roobka sidoo kale waa lagu daray.
Wellies maaha kabaha ugu casrisan, laakiin iyagu ma ahan kuwo aan la jaan qaadi karin qaabka. Waddamada ugu roobka badanna si fiican ayey u yaqaanaan. Tilmaamaha soo socda iyo fikradaha ayaa kaa caawin doona inaad yeelato qorshe wanaagsan oo aad ku weheliso ceelashaaga:
1 Goorta la xidhayo ceelasha
2 Waa imisa qiimaha ceelashu?
3 Waxay ku egtahay ceelasha jiingadaha
3.1 Sida loo doorto dalladda
4 Koodhadhka roobka
4.3 Noocyada jardiinada
4.4 Koodhadhka roobka
4.5 Mareykan ah
Goorta la xidhayo ceelasha
Wellies waxaa loo adeegsadaa waxqabadyada dabiiciga ah iyo ku wareejinta magaalada. Marka ay timaado adeegsiga magaalada, roob ama baraf waa shardi. Sida iska cad, marka cimiladu wanaagsan tahay ma aha kabaha ugu guusha badan.
Munaasabad kale oo lagu isticmaalo ceelashaada waa xafladaha muusikada. Glastonbury, mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn, ceelasha ayaa ka mid ah madaddaalada. Ka qeybgalayaasha waa inay ku daraan muuqaalkooda si ay ugu awoodaan inay ku dul socdaan dhoobada badan.
Waa imisa qiimaha ceelashu?
Suuqa wuxuu bixiyaa tiro badan oo xulashooyin ah. Waxaa jira ceelasha la awoodi karo iyo ceelasha leh qiime sare, kuwaas oo iyaguna loo malaynayo inay tayo sare leeyihiin. Qiimaha ceelasha waxay u dhexeeyaan 10 ilaa 200 euro, waxay kuxirantahay soo saaraha.
Hunter, oo ka mid ah soo saarayaasha ugu da'da weyn uguna caansan, ayaa ku jira dalabkiisa noocyo badan oo naqshado ah, oo ay ku jiraan kuwan Chelsea qaab ciyaareedkeeda fiican. Kumaa yidhi ceelashu ma noqon karaan kuwa casri ah? In kasta oo qiimaheedu sarreeyo, waa ikhtiyaar mudan in la tixgeliyo, gaar ahaan haddii aad raadineyso wax u adkaysta oo soo jiidasho leh.
In kasta oo ay iyagu qaab ahaan u qaabaysan karaan, haddana ceelasha ayaan loo samaynin inay ka fajiciyaan, sida noocyada kale ee kabaha (gaar ahaan kabaha isboortiga). Sababta loo helayo ceelal labo ah ayaa ah inaad gacanta ku haysato kabo si ay uga caawiso cagahaaga inay qalalaan markii loo baahdo. Marka waxa lagaa rabo inaad weydiiso waa inay si wanaagsan u gutaan shaqadooda, wax intaa dhaafsiisan.
Waxay ku egtahay ceelasha jiingadaha
Xilliga dayrta / qaboobaha 2018-2019
Dsquared2 guga / xagaaga 2010
A-Cold-Wall dayrta / jiilaalka 2018-2019
Sida macquul ahaan ah, tirada muuqaalada ceelasha leh ee lagu arko catwalks aad bey u yartahay. Dhanka kale, asalka naqshadeeyayaasha ayaa ku siin kara dhiirigelin aad u baahan tahay si aad isugu darsato ceelashaaga. Lacoste, Dsquared2 iyo A-Cold-Wall ayaa ka mid ah shirkadaha mar uun doortay kabahaan si ay u soo bandhigaan raggooda uruurintooda.
Qaabka kabaha iyo qaabka ay isugu darsamaan wax badan baa iska beddelaya iyadoo kuxiran naqshadeeyaha. Marka laga hadlayo catwalks, kabaha roobka (qaar ka koreeya surwaalka iyo kuwa kale ee hoose) ayaa lagu daraa dhammaan noocyada dharka iyo qalabka: jooniska, surwaalka dharka, dhididka, koofiyadaha baaldiga, koofiyadaha baseball ...
Sida loo doorto dalladda
Dalladda ugu habboon waxay kuxirantahay qaabka qaybaha kale ee harsan, sidaas darteed waa xulasho ugu wanaagsan ee ugu dambeeya. Haddii muuqaalkaagu yahay mid rasmi ah, tixgeli midabada madow ama daabacadaha caadiga ah, sida plaid, dalladdaada.
Dhanka kale, haddii dharka caadiga ahi ku badan yahay qaabkaaga, Waxaad u isticmaali kartaa dallad xoogaa geesinimo ah, midab caadi ah ama nooc nooc ah.
Qaybta ugu habboon marka laga hadlayo abuurista muuqaallada leh ceelasha ayaa ah jaakad., maadaama dharka intiisa kale ay tahay midka caadiga ah. Waxaa jira qaabab iyo heerar kala duwan oo biyo-biyoodka. Jaakadaha iyo jardiinooyinka ayaa sifiican ugu shaqeynaya dharka caadiga ah. Haddii aad u labbisto qaab rasmi ah, tixgeli jubbado jeexjeexan iyo blazers.
Ma u baahan tahay jaakad roob ah oo ku habboon xirashada ceelasha iyo dharka caadiga ah? Jaakadaha ayaa ah xulasho aad u fiican muuqaalkaaga caadiga ah. Nooca noocan oo kale ah waa la duuduubi karaa ama waa la fududaan karaa.
Parkas ayaa beddel u ah dabaysha jebiya. Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya labada qaybood ayaa ah, Maaddaama ay leeyihiin dhar badan, jardiinooyinka ayaa daboolaya qayb ballaaran oo jirkaaga ka mid ah (iyo dharkaaga).
Fiiri maqaalka: Parkas Ragga. Halkaas waxaad ka heli doontaa wax kasta oo aad u baahan tahay si aad ugu guuleysato markaad iibsaneyso mid.
Koodhadhka roobku waa jaakadda ugu fiican ee roobka haddii aad caadiyan dharka caadiga xidhato. Waxay sameystaan ​​koox weyn oo leh suudhadhka mahadnaqa goos gooska loogu talagalay. Koodhka caadiga ah ee xarkaha xarkaha leh suunka waa shay aamin ah, laakiin haddii aad doorbideyso wax fudud, sida midka aad ku arki karto xariiqyadan, iskumana dhici doono ugu yaraan muuqaalkaaga ceelasha qaab-dhismeedka rasmiga ah.
Jaakadaha jeexjeexa ma aha wax aad? Xaaladdaas, tixgeli jaakad duuduuban oo kaa ilaalinaysa waxyaabaha jira.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Waxay ku egtahay ceelasha